Prof. Jawaari: Marxuum Tubeec berri ayaa lagu aasayaa Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta si rasmi ah u sheegay in berry oo axad ah Muqdisho la keeni doono meydka Allaha u naxariistee Marxuum Maxamed Suleymaan Tuceebc, oo dhawaan ku geeriyooday dalka Jarmalka.
Prof. Jawaari oo warbaahinta maanta kula hadlay Muqdisho ayaa shaaciyey in xubaxnimada beeri ah Muqdisho la keeni doono meydka fanaankaas geeriyooday, wuxuuna shacabka ugu baaqay iney ka qeyb qaataan aaskiisa.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku wargelinayaa in berri Muqdisho la keenayo meydka Marxuum Maxamed Salbeen Tubeec, islamarkaana aas qaran loo sameyn doono, waxaana shacabka ugu baaqayaan iney janaasadiisa iyo aaskiisa ka qeybgalaan” ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari.
Wararka ka imaanaya dalka Jarmalka ayaa sheegaya in meydka Maxamed Suleymaan manta diyaaradi kazoo qaaday dalkaas, iyadoo lagu wado in berri subaxnimo hore laga soo dejiyo garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.
Maamulka Somaliland ayaa shalay sheegay in Marxuum Tubeec lagu aasayo magaalada Berbera, iyadoo warkaas uu sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulka Somaliland C/Raxmaan C/llaahi Ismaaciil (Saylici) oo magacaabay guddi aas u sameeya Marxuum Tubeec, kuwaasoo ka koobnaa 12 xubnood.